Dawlada oo hindise caafimaad dib uga noqotay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawlada oo hindise caafimaad dib uga noqotay
La daabacay onsdag 26 november 2014 kl 16.00
Dawlada ayaa hadda dib ugu noqotay hindise caafimaad oo ay hore u soo jeedisay, ka dib markii ay kala kulantay dhaleecayn badan. Hindisahan ayaa ahaa in maamulada gobolada ee caafimaadka iyo gaadiidku, aanay sharci u lahayn in ay bixiyaan caafimaadka asaasiga ah, waxaa loo yaqaan primärvården
Kulan ay goluhu yeesheen maalinimadii shalay oo salaasa ahayd, ayaa lagu sheegay in waqtigii lagaga soo talo bixinayay hjndisahan oo ahaa saddex usbuuc uu yahay mid aad u gaaban. Sidoo kalena aanay dawladu sharixin sababta sharciga loogu bedelaayo sidan dhakhsaha badan.
Golaha sharciga ayaa sidoo kale dhaleecayn u jeediyay dawlada, middaas oo la xidhiidha in dawladu ay meesha ka saarto da’daalo badan oo muhiim ah oo hindisahan lagaga soo talo bixin lahaa.
Si kastaba ha ahaate, dawlada ayay hadda la tahay in dib u soo celiso hindise cusub oo dhaqan geli doona 1 bisha luuliyo ee sannadka soo socda, sida uu sheegaayo wasiirka daryeelka bukaanka Gabriel Wikström.